Isikhathi Samanje Sibiza Inguquko Endleleni Esibhala Ngayo – The Ulwazi Programme
Kulesonto eledlule, ngike ngavakashela umcimbi obizwa ngokuthi i-“Time of the Writer“. Lo mcimbi, owenzeka njalo ngonyaka eThekwini, ongeminye emikhulukazi eNingizimu Afrika egqugquzela ukufunda nokukhiqiza imibhalo nezincwadi.
I-poster ye ‘Time of the Writer,’ umcimbi ebesiwuhambele
Umngani wami ebengihambe naye, ukhale ngokuthi cishe bonke abantu abebeveza izincwadi zabo babhala ngesiNgisi. Empeleni akekho noyedwa ambonile obhala ngolimi lwebele lase-Afrika.
Umngani wami ube seyaqhubeka wangitshela ukuthi usiko lokubhala nokufunda ngesiZulu selishabelele.
Ngabe sengiyamuphendula ngokuthi kangivumelani naye uma ethi selishabelele usiko lokufunda nokubhala ngesiZulu, kepha ngiyamuvumela uma ethi asiyisukumele le nsumansumane esibhekene nayo, ngoba imibhalo yesiZulu ayihloniphekile futhi ayiziwa ngalendlela okumele yaziwe ngayo.
Ngikholelwa wukuthi lisekhona ithuba lokuqhuba usiko lokufunda ngesiZulu kodwa isikhathi samanje sibiza ukuthi siguqule izingqondo njengabalobi bakwantu.
Ngithi angikubeke lokhu ngoba kukhona abakholwa wukuthi usiko lokufunda ngolimi lukaPhunga noMageba selishabalele. Empeleni ukufunda izinto ezakhayo nanoma ingabe ingaluphi ulimi kubukeka sekufadebele, abantu bayakhala.
Abakhiqizi bamaphepha bakhala ngokwehla kwenzuzo kanti abadayisi bezincwadi bavala izitolo ubuthaphuthaphu. Abantu abajwayele ukuvakashela imitapo yolwazi, bayangokuncipha. Isimo sibukeka sinomunyu, siyasabisa.
Lokhu kwenza abanye bakholwe wukuthi seyiphele nya intando yokufuna ulwazi. Ngicabanga ukuthi sisinga ezimithiyo uma sithi abantu sebazihlukanisa nentando yolwazi ngoba siyazi ukuthi ngokuvela kwe-inthanethi nezinkundla zokuxhumana, miningi imibhalo ekhiqizwayo efundwa ngabantu, ikakhulukazi intsha yanamuhla.
Kuyiphutha futhi ukuthi izinto ezitholakala kwi-inthanethi azinakho ukwakha futhi azinamqondo ophusile.
Siyazi ukuthi amaphepha amaningi ayangokushicelela izindaba kwi-inthanethi kanti aseyangokunyukela ekusebenziseni izinkundla zokuxhumana ukusabalalisa izindaba. Kanjalo nababhali bezincwadi.
Iqiniso wukuthi isikhathi sesiphambili kakhulu. Angeke sisakwazi ukwenza sengathi sisaphila eMandulo.
Ababhali nabakhiqizi bolwazi olubhaliweyo kumele baqonde ukuthi sebekhiqizela isizukulwane esisha.
Ngaphambi kokuthi bakhiphe imali bathenge incwadi, abantu abasha banamuhla bazibuza ukuthi kungenzeka yini leyo ncwadi bayithole kwi-inthanethi.
Kokunye bazibuza ukuthi kungenzeke yini bayithole kubangani noma kubantu abasondelene nabo, basebenzisa o-Bluetooth, ama-Email no-Share It.
Kumele sikuqonde futhi sikwamukele ukuthi izikhathi sezishintshile futhi ngeke kusabalula ukukhokhisa abantu ngento abangayithola ngenani eliphansi kwenye indawo noma mahhala.
Kodwa engicabanga ukuthi okubaluleke kakhulu ukuqonda isizukulwane sanamuhla.
Sekukaningi ngizwa abantu bekhala ngalesizukulwane bethi siyinqwaba yabantu abalahle ulimi namasiko.
Iqiniso wukuthi lesi sizukulwane sizalelwe emhlabeni lapho khona izinhlanga nezilimi sezihlangane zaxubana kwase kwaphuma ingxubevange yezilimi namagama. Abantu abasha banamuhla bakhule lapho khona izinkolelo zingafani, lapho futhi abantu bevunyelwe futhi bekholelwa kwizinkolelo ezahlukahlukene.
Le genge ikhule ngomabonakude oveza ngokusabelele izilimi zokudabuka eNtshonalanga. Le ntsha ifunde ngesiNgisi ezikoleni.
Omakhalekhukhwini namakhompyutha asetshenziswa yilesizukulwane kwakhiwe ngenhloso yokuthi kusebenze kahle ngezilimi zaseNtshonalanga, ikakhulukazi isiNgisi.
Siyaphoqeka ukuthi samukele ukuthi isikhathi sesishintshile.
Yize zikhona izingqinamba, anginakungabaza ukuthi ulimi lwesiZulu lisazoba khona isikhathi eside. Kepha engikusabayo inkinga esiyobhekana nayo uma abalobi nababhali bakwantu bengaqali ukubhala ngendlela eqondwa yisizukulwana sanamuhla futhi exoxa eveza usikompilo lwabo nenqubekela phambili.
Izindaba nomlando wethu ubalulekile.
Kumele sibhale izindaba ezizobachaza. Kumele sibhale ngendlela abazoyiqonda. Angisho ukuthi asidicilele ulimi lethu phansi, kodwa asiqale sibhale ngendlela abazokuyiqonda. IsiZulu masisenze sizwakale, futhi sidlale indima enkulu ebucikweni, emafilimini, emisakazweni, emculweni nakomabonakude.
Lisekhona ithuba, bantu bakwantu. Asiqale ukwenza isiqiniseko sokuthi IsiZulu singena kahle esikhathini samanje. Kuzoqala ngokuthi samukele isikhathi sanamuhla.